Insight From Semalt: Zviratidzo Zvokuchenesa KweIndaneti Job Scams
Kutsvaga basa ibasa rakaoma mukati mawo pachako sezvo kune zvakawanda zvekushanda kune zvinodzingwa. Dziva guru revatsvaki vemabasa kunze uko rinoita kuti zvinyoronyoro zvinyorwa zvepaInternet uye zvinotyisa. Isu tinyorwa tinowana mazana emabasa ekubudisira muIndaneti uye anowedzera paIndaneti zuva rega rega. Iwe unofanirwa, saka, ushamise kana rimwe basa rimwe chete raunopa rive rechokwadi kana rakaipa - купить мебель через интернет phpbb. Basa rechokwadi rinopa chiito chakanaka kune chinangwa chako chebasa, uye basa rakaipa raunokupa rinokubhadhara mari yako yakaoma-yakagadzirirwa, nguva nemashoko ako ega.
Muchikamu chino, Julia Vashneva, we Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vanobudirira, anoratidza maitiro anowanzoshandiswa anoshandiswa nebasa rinotyisa:
Zvakakosha here kuti irege kuva yechokwadi? - Heino chibvumirano, basa rekupa basa rakanyanya kunaka kune chokwadi kunyanya apo iwe unosangana neunogona kushandira pane imwe nzvimbo yausina kutevera kana kunyange yakambonzwa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, vanotora cV yako kubva kune nzvimbo dzebasa pasina purogiramu yega yega uye kukunyengedza nekusagadzikana kwekubhadharwa kwemari uye maitiro ehutano hwako nehutano. Gara wakachengeteka nekuisa zvigwaro zvako pazvakavonekwa zvemasimiti emabasa nemutemo wakaoma wega wega.
Unprofessional Emailing- Dambudziko rinogara rakanyatsoratidzwa..Scammers ichapinza mubhokisi rako rekunyora nemamwe maimeri asina kukumbirwa akawanda ayo ane spelling, punctuation uye ma grammatical. Ramba wakangwaririra kusakanganiswa kwakadaro.
Zvakajeka Jobho Zvitsanangudzo Nezvinodiwa- Tsanangudzo dzebasa uye zvido zvinotarisirwa kuti mutengo usingakwanikwi vasarudzo kubva mumakwikwi. Zvinyorwa zvinotora zvinyorwa zvisingabatsiri zvemabasa nenzira iyo inenge inenge inoshandiswa nevanhu vose. Kuburitswa kwebasa uye zvido zvebasa rekupa basa rinofanira kunge rakananga uye rinonyatsoda kuti dzidzo dzive nedzimwe nheyo.
Emails kubva kumakambani e-mail yega ega asina ruzivo rwemashoko akadai sezita rekambani, kero nevanosangana navo vanogonawo kukwezva pasi. Mune zvimwe zviitiko, scammer inoratidza zvisingaoneki zvikonzero zvekushandisa maail ega ega semaseva ari pasi.
Yahoo uye Instant Messenger Hurukuro - Yahoo Instant Messenger yakakurumbira nemabasa epamusoro. Haasi mibvunzurudzo yepaIndaneti yose yakashata asi kana iwe wakokwa kune imwe nzvimbo paIndaneti uchenjere nekutsvakisisa zvakakwana kambani isati yaitika.
Paunotarira kumusoro kambani yepaIndaneti, unotarisira mitsva yekutsvaga yakarurama uye yechokwadi kubva pakutsvaga. Kana ruzivo rwaunowana haruna kuwedzerwa, saka runogona kunge rwuri dambudziko. Vanhu vanogona kuvhara pasi mazita emakambani akakodzera uye mawebsite, asi zvakadaro, internet inogona kukubatsira iwe kuti uifunge.
Chikumbiro cheNhoroondo Yakachengetedzwa - Dzimwe nguva vanotsvaka basa vachakumbirwa kubudisa ruzivo rwevanenge vachivanzwa nefoni kana email kana kutobhadhara. Izvi zvinofanira kuva chiratidzo chenyevero, uye vanotsvaka basa vanofanira kuchenjerera.
Kana munhu angashandisa akakumbira kushandisa maakaunti ako kutumira mari kana kutumira zvinhu zvinokosha kana mari saka tora kungwarira.
Kana vashandi vakukumbira kukumbira kuti ubhadhara usati wambvunzurudza kana basa rekudaro saka rinogona kuguma richiita sengozi. Makambani anokwadi haazombokumbira izvozvo.
Pakupedzisira asi kwete, inzwi iroro romukati rinokunyeverai pamusoro pekugona kwebasa iro rinopa iwe unofara pamusoro pekuita shanje.